June | 2009 | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 27/06/2009 ⋅ 1 Comment
၁၉၈၃တုန်းက ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းမှာ ၀င်းငြိမ်းနဲ့ခင်နှင်းယုရဲ့ အင်တာဗျူးပါပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဆရာမကြီးက သူ့ရဲ့ မျှော်လင့်လို့ဖြင့်မဆုံးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဘုရားကျွန်တွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုနောက်ခံကို ရှင်းပြရင်း “ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတောင်းစားကတော့ မရှိတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ မစုအမြင်ပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာ သူတောင်းစားပေါတာ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေရက်ရောလွန်းလို့ပါ။ လွယ်လွယ်ရလို့ တောင်းစားနေကြတာပဲ။ ရေသာခိုကြလွန်းတာပဲ။”
In November 2008, I postedalink here to an article on Aung San Suu Kyi published in Guardian newspaper. The title was ‘Not suchahero after all’. Then I asked my blog visitors to comment on that article, since it was an unfair attack on Aung San Suu Kyi and based on wrong facts. I am now … Continue reading →
အန်တီရေ- အန်တီနဲ့တော့ လူချင်းမသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၁၉၈၈တုန်းက ပန်းဆိုးတန်းကျူရှင်တခုမှာ လုပ်တဲ့ အန်တီ့ရဲ့ ဟောပြောပွဲကို သွားနားထောင်ပြီးကတည်းက စိတ်ထဲမှာ ရင်နှီးနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။
It’s not too late to rescue Burma from further tragedy
Posted by zizawa ⋅ 18/06/2009 ⋅ Leaveacomment
Palm Oil and Detergent
Posted by zizawa ⋅ 11/06/2009 ⋅2Comments
မနေ့က စားအုန်းဆီထဲမှာ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေရောပြီး မခဲအောင်လုပ်နေတယ်လို့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတခုကြားပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းပါ။
A site for jobs, scholarships and training programmes
Posted by zizawa ⋅ 09/06/2009 ⋅ Leaveacomment
Posted by zizawa ⋅ 09/06/2009 ⋅ 1 Comment
လန်ဒန်မှာ မြေအောက်ရထား အလုပ်သမားသမဂ္ဂက ၄၈နာရီသပိတ်မှောက်ပွဲ စပါတော့မယ်။ ဒီနေ့ညနေ ၆နာရီ၅၉မိနစ်ကနေ ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၆နာရီ၅၉မိနစ်ထိပါ။ သောကြာမနက်မှ မြေအောက်ရထားတွေ ပုံမှန်ပြန်ဆွဲမယ်လို့ ကြေညာနေပါတယ်။